Idatha yokuThengisa: Isitshixo sokuma ngaphandle ngo-2021 nangaphaya kwa | Martech Zone
Kule mihla nakwiminyaka yobudala, akukho sizathu sokungazi ukuba ungazithengisa kubani iimveliso kunye neenkonzo zakho, kunye nokuba bafuna ntoni abathengi bakho. Ngokufika kwesiseko sedatha yentengiso kunye nenye itekhnoloji eqhutywa yidatha, zihambile iintsuku zokungajoliswanga, ezingakhethwanga, kunye nentengiso yohlobo oluqhelekileyo.
Imbono emfutshane yeMbali
Ngaphambi kowe-1995, ukuthengisa kwakusenziwa ikakhulu ngeposi kunye nentengiso. Emva kowe-1995, ngokufika kwetekhnoloji ye-imeyile, ukuthengisa kuye kwacaca ngakumbi. Kwakunje ngokufika kwee-smartphones, ngakumbi i-iPhone ngo-2007, apho abantu baqala ukubambeka kumxholo, ngoku kufikeleleka ngokulula kwizikrini zabo. Ezinye ii-smartphones ziye zavela kwimarike kungekudala. Uhlaziyo lwe-smartphone luvumele abantu ukuba baphathe isixhobo esibambe ngesandla ngesandla naphina. Oku kukhokelele kulwazi olukhethiweyo lomsebenzisi olwenziweyo olujikeleze-iwotshi. Ukuvelisa umxholo ofanelekileyo kunye nokuwusebenzisa kubantu abafanelekileyo baqala ukuba sisicwangciso esiliqili sentengiso kumashishini, kwaye kunjalo.
Ukuza kwi-2019 kwaye sijonge ngaphaya kwayo, siyabona ukuba abasebenzisi bahamba kakhulu ngokuxhomekeka okunyukayo kwizixhobo zabo eziphethwe ngesandla. Idatha yokuthengisa namhlanje inokufakwa kuwo onke amabakala enkqubo yokuthenga. Ukuze abathengisi bafumanise ukuba bafuna ntoni abathengi babo, kufuneka kuqala bazi ukuba bajonge phi! Idatha inokunika ulwazi oluxabisekileyo kwimisebenzi yemithombo yeendaba yoluntu, ukukhangela indlela yokuziphatha, ukuthengwa kwi-Intanethi, iipateni zotyalo-mali, iindawo zentlungu, iimfuno, kunye nezinye iindlela ezibalulekileyo. Olu hlobo lwedatha yentengiso iya kuba sisiseko saso nasiphi na isicwangciso sentengiso esinenzuzo.
Amaqhinga asisiseko oKuqokelelwa kweDatha
Sukuya kuqokelela idatha ngokungaboni! Kukho inani elingenakoyiswa ledatha yentengiso ekhoyo phaya, kwaye ubukhulu becala ufuna isiqwenga sayo kuphela. Ukuqokelelwa kwedatha kuya kuxhomekeka kubume beshishini lakho nakwinqanaba apho inkampani yakho ime kumjikelo wophuhliso. Umzekelo, ukuba uyisiqalo malunga nokuqalisa, kuya kufuneka uqokelele uluhlu olubanzi lweedatha ngeenjongo zophando lweemarike. Oku kunokubandakanya:
Iidilesi ze-imeyile yeqela ekujoliswe kulo
Ukukhethwa kweendaba zosasazo
Iindlela zokuhlawula ezikhethiweyo
Amafemu kwishishini anokuba sele enedatha yokuthengisa esele ikhankanyiwe. Okwangoku, basoloko befuna ukuqhubeka nokuhlaziya kwezi ndidi ngelixa beqokelela idata kubathengi abatsha. Kuya kufuneka ukuba bagxile ekulandeleni ingxelo exabisekileyo yabathengi kunye nokufumana ukuqonda kwixabiso lemveliso ekhoyo ngedatha.
Ukongeza, ukuqala, ii-SMEs, kunye namaziko amakhulu, ukugcina iirekhodi zazo zonke iintlobo zonxibelelwano nabathengi kubalulekile. Oku kuyabavumela ukuba balungelelanise isicwangciso sonxibelelwano esisebenzayo kunye nabaxumi.
Amanani Musa ukuxoka
I-88% yabathengisi isebenzisa idatha efunyenwe ngumntu wesithathu ukuphucula ukufikelela kwabo kubathengi kunye nokuqonda, ngelixa i-45% yamashishini bayisebenzisa ukufumana abathengi abatsha. Kwafunyaniswa ukuba iinkampani ezisebenzisa idatha eqhutywa ngokobuqu ziphucula ii-ROI zazo kwintengiso izihlandlo ezihlanu ukuya kwezisibhozo. Abathengisi abagqithe kwiinjongo zabo zengeniso babesebenzisa ubuchwephesha bobuchwephesha beenkcukacha ngama-83% exesha.
Ngaphandle kokuthandabuza, idatha yokuthengisa iyimfuneko ekukhuthazeni iimveliso kunye neenkonzo kubantu abalungileyo kwi2020 nangaphaya.
Izibonelelo zeDatha yokuThengisa
Masiqonde nzulu ngezibonelelo zentengiso, eziqhutywa yidatha.
Ukwenza ubuqu beQhinga lokuThengisa Idatha yentengiso sisiqalo esivumela abathengisi ukuba benze izicwangciso zentengiso ezijolise kuzo ngonxibelelwano lomntu. Ngedatha ehlahlelwe ngononophelo, amashishini anolwazi olungcono malunga nokuba athumele nini imiyalezo yentengiso. Ukuchaneka ngexesha elifanelekileyo kuvumela iinkampani ukuba zifumane impendulo kubathengi, ekhuthaza ukubandakanyeka okuhle.
I-53% yabathengisi ithi ibango lonxibelelwano olusisiseko kubathengi liphezulu.
IMediaMath, uVavanyo lweHlabathi loLwazi lweNtengiso kunye neNtengiso
Yandisa amava abaThengi -Amashishini abonelela abathengi ngolwazi oluluncedo kubo aya kuma kwiligi yabo. Kutheni le nto ukhuthaza ngamandla imoto yezemidlalo kumthengi oneminyaka engama-75 ubudala? Ukuthengisa idatha ekhokelwa yimikhankaso ijolise kwiimfuno ezithile zabathengi. Oku kuphucula amava abathengi. Ukuthengisa, ubukhulu becala, kusengumdlalo weendwendwe, kwaye idatha yokuthengisa ivumela amashishini ukuba enze uqikelelo oluphezulu lokufunda. Intengiso ekhokelwa yidatha inokubonelela ngolwazi oluhambelanayo kulo lonke unxibelelwano lwabathengi. Ivumela i-Omnichannel yeentlobo ukuba zenziwe apho unxibelelana nabo ngemidiya yoluntu, unxibelelwano lomntu, okanye ngomnxeba, abathengi bafumana iinkcukacha ezifanayo kwaye bafumana amava okuthengisa afanayo kuwo onke amajelo.
Unceda ukufumanisa amaTshishini okuzibandakanya ngokufanelekileyo -Ukuthengiswa okuxhotyiswe ngedatha kuvumela iinkampani ukuba zichonge eliphi ijelo lentengiso elenza eyona mveliso okanye inkonzo enikiweyo. Kubathengi abathile, unxibelelwano ngemveliso ngamajelo eendaba ezentlalo anokuvusa ukubandakanyeka komsebenzisi kunye nokuziphatha. Izikhokelo eziveliswe ngeFacebook zinokuphendula ngokwahlukileyo kunokhokelo oluveliswe kwiNethiwekhi yeGoogle yokubonisa (GDN). Idatha yokuthengisa ikwavumela amashishini ukuba abone ukuba yeyiphi na ifomathi yomxholo esebenza kakuhle kwisitishi sentengiso esichongiweyo, nokuba ikopi emfutshane, infographics, izithuba zebhlog, amanqaku okanye iividiyo.
Iphucula uMxholo woMxholo Idatha entsha iyaqhubeka nokungena kubathengi ekujoliswe kubo mihla le, kwaye abathengisi kufuneka bayihlalutye ngononophelo. Idatha yokuthengisa yazisa amashishini ukuba enze ngcono okanye aguqule iindlela zawo zangaphambili zokuthengisa ngokusekwe kwiimfuno ezihlala ziguquka zabathengi babo. Njengokutsho kukaSteve Jobs, “Kuya kufuneka uqale ngamava abathengi kwaye ubuyele umva kwitekhnoloji. Awunokuqala ngetekhnoloji kwaye uzame ukuqonda ukuba uza kuyithengisa phi ”. Ngokuqonda iimfuno zabasebenzisi ezinamandla ngcono, ayizukubandakanya kuphela abathengi abatsha kodwa iya kubagcina nabadala. Umgangatho womxholo ubalulekile ekufumaneni abathengi nasekugcinweni kwabathengi.
Kuya kufuneka uqale ngamava abathengi kwaye usebenze ubuye umva kwitekhnoloji. Awungekhe uqale ngetekhnoloji kwaye uzame ukuqonda ukuba uza kuyithengisa phi.
Unceda ukugcina iliso kukhuphiswano -Idatha yokuthengisa inokusetyenziselwa ukujonga kunye nokuhlalutya iindlela zakho zokuthengisa. Amashishini angazifumana iindidi zedatha efundwe ngabakhuphisana nabo kwaye baqikelele ulwalathiso abaza kukhetha ukuthengisa iimveliso zabo. Inkampani esebenzisa idatha ekufundeni abo bakhuphisana nayo inokukhetha ukusebenzisa iqhinga lokulwa nalo eliya kuthi livumele ukuba liphume phambili. Ukusebenzisa idatha ekufundeni abo sikhuphisana nabo kuvumela amashishini ukuba aphucule indlela aqhuba ngayo kwintengiso kwaye angazenzi iimpazamo ezifanayo ezenziwa ngabo bakhuphisana nabo.
Guqula ulwazi lube ziZenzo
Idatha yokuthengisa inikezela ukuqonda okusebenzayo. Ukuphucula amaphulo okuthengisa, kuya kufuneka uyazi kangangoko unakho malunga nabathengi bakho. Ukuqhelaniswa okuneenkcukacha sisitshixo sempumelelo kwiminyaka ezayo. Ukuphumeza isisombululo sentengiso esikhokelwa yidatha kunokutshintsha ngokupheleleyo indlela owenza ngayo ishishini. Nokuba umthengisi unengqiqo kangakanani, abanakho ukwenza imimangaliso kuphela ekuzingeleni. Kuya kufuneka baxhotyiswe ngokwenza isicelo sedatha yentengiso yeziphumo eziphezulu.
tags: lshishiniuphando lokhuphiswanoUmxholo womxholoamava kumakhasimendeamajelo okubandakanyaamajelo entengisoidatha yentengisoNgokwezifisoekujoliswe kuyoukhetho lomsebenzisi